Day: Mee 8, 2020
Vidiyo mgbochi Kovid-19 na-abịarute ọkwa nnwale ụmụ anụmanụ
Minister Mịnịstrị na teknụzụ, Mustafa Varank kwupụtara na ọgwụ mgbochi ọgwụ a ga-ebido megide Kovid-19 erutela ogo nke ụmụ anụmanụ mahadum atọ, na otu n'ime ha amalitela nnwale ahụ. N’ikwu na ogbo ulo ogwu bidoro nnwale ndị ahụ [More ...]
Kedụ ka ụgbọ elu ụgbọ elu nke ZZBAN, ESHOT na Metro ga-adị na ngwụcha izu na İzmir?
Edoziwo usoro njem njem ọha maka ụbọchị nke 9-10 nke May, mgbe a ga-emejupụta usoro ahia n'oge İzmir. Ọrụ ụgbọ njem ọha na ndị ọkachamara na ndị ọrụ atụpụrụ; ESHOT ụgbọ ala, na mmekorita ya na Obodo Metro na TCDD-İzmir [More ...]
Marmaray ọ na-arụ ọrụ na mmachi izu?
Marmaray Halkalı-Gebz ka ụgbọ oloko, ọchịchị na ụmụ amaala n'èzí akporo nke alọta iji nye njem na Republic of Turkey mere ọkara awa etiti oge na a na nkwupụta si General Directorate of State Railways; " Ozi nke ime [More ...]
Emebere ụlọ nyocha Covid-19 maka ndị ọrụ OSB na Bursa
Urslọ azụmahịa na ụlọ ọrụ Bursa emeela ọmụmụ ihe dị mkpa nke na-echegbu ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ha n'ihi ntiwapụ nke Coronavirus (COVID-19). Ministry of Health, Turkey Institutes of Health Administration (TÜSEB), BCCI na Bursa Haziri [More ...]
Emere ugwo mbu ijeri ise nke Nde ise na iri ise na ahia nke Kocaeli
Mgbe ọrịa coronavirus ahụ metụtara ụwa dum, Kocaeli Metropolitan Mayor Assoc. Dr. Site Tahir Büyükakın, a ga-enwe “mmiri ndụ” maka azụmaahịa njem ọha [More ...]
Ndị bi na Izmir n'ụlọ na ngwụsị izu, teamsZBETON otu dị n'ọrụ!
Obodo Izmir dị na ngalaba ga na-arụ ọrụ na ngwụcha izu a, ebe a ga-etinye oge ọ ga-abịa, na ndị otu 19 maka asphalt na ọrụ mmezi okporo ụzọ. Aszọ dịka Mürselpaşa, Yeşildere, Akçay, n'okporo ámá Mithatpaşa na Altınyol [More ...]
Ndi Metrobus na Ferry na-arụ ọrụ na ngwụsị izu na Istanbul?
MMI ga-aga n'ihu na-arụ Istanbul na ihe ruru ndị ọrụ puku mmadụ iri na asaa na ngwụsị izu a, ebe ọ ga-aga n'ihu. A ga-eme ọrụ bọs, metro na ugbo n'ụtụtụ ma na mgbede. Nhicha obodo, [More ...]
Ankara Ankaray na Metro na-arụ ọrụ na ngwụsị izu dị na Ankara?
N’ikwekọ na mkpebi nke Ankara Governorate Provincial Hygiene Board, akara ụbọchị 19 na ọnụ ọgụgụ 09/10, na ụbọchị nke 2020-07.05.2020 Mee 2020, ebe a ga-emejupụta mgbochi n’ogo nke usoro a ga-ewe megide ọrịa coronavirus (Covid-30). [More ...]
25 arịa ga-esi Anatolia gafere na Europe na Marmaray kwa afọ
Minista Karaismailoğlu: “A ga-ebu puku igbe 25 kwa afọ site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe Anatolia ma gafee n'akụkụ Europe site na Marmaray. Mbupu nke ngwaahịa a na-ebupụ n’obodo Çorlu, agala n’obodo Europe ga-abụ ụgbọ oloko. Inye ụgbọ ala [More ...]
Onye nnochi anya itinye aka na Publicgbọala ndị nkịtị na Şanlıurfa akwụsịla
Ndi isi obodo ukwu, nke lere anya na enwere otutu onyinye site na omume ohuru ohuru nke ugbo ala nke ndi obodo na Şanlıurfa, akagbuola ntinye nke Assistant Public Bus na oge a. Transportgbọ njem ọha na ntụsara ahụ na ndị njem [More ...]
A ga-ekesaa nkpuchi karịa ihe karịrị afọ 65 na Izmir, yabụ kedu ebe anyị nwere ike ịzụta ya?
Obodo Izmir Metropolitan ga-ekesara ụmụ amaala ihe karịrị afọ 65, ndị nwere ike ịga n'okporo ụzọ awa ndị Mịnịsta na-ahụ maka ime na-ekpebi na Sọnde na-esote. Continuga n'ihu na imepụta na ikesa masks iji mee ka ohere nke ndị ọrịa gwọọ na İzmir, İzmir Metropolitan [More ...]
Ndị ọrụ Turkish ka ijikwa S-400 Air Defense Missile Systems
Onye isi oche nke Preslọ Ọrụ Nchebe Ndị Isi nke Turkey. Dr. İsmail Demir, onye isi SSBTube O jiri uzo ya zaghachi ajụjụ. N’okwu ya ebe İsmail Demir tụlere ọnọdụ ọnọdụ dị na mpaghara ahụ, o nwere nchegbu banyere sistemụ mgbagha ikuku nke S-400. [More ...]
Nnyefe PorSav Nnukwu Mgbapu ikuku nke ikuku
N'ime ogo Portable Air Defense Missile System Project (PORSAV), nke a na-arụkọ ọrụ na ASELSAN na Roketsan, a na-eme atụmatụ nnyefe ịmalite n'oge obere oge. Industrylọ ọrụ nchekwa na akwụkwọ akụkọ mpaghara na ụbọchị ndị ọzọ na isiokwu ahụ [More ...]
ASELSAN, KANGAL Drone-Mini / Micro UAV & RFEYP inggwakọta / ìsì (Jammer) chọrọ nke Onye isi Nchịkwa nke Nchebe na Forcegbọ Ahịrị n'ime ogo nke nkwekọrịta ahụ bịanyere aka na Ngalaba Nchekwa Industrylọ Ọrụ Nchebe (SSB) na 2018, [More ...]
Akwụkwọ Ozi Okwu Mmalite
Weblọ Ọrụ Weebụ weebụ - Neirt
Anyị ụlọ ọrụ; Ọ bidola ijere gị ozi dịka n’afọ 2012 ma rụchaa ọrụ dị iche iche. Nzube ntanetị maka ndị ahịa anyị bara uru site na ịzụlite ọrụ teknụzụ niile nke ụwa dijitalụ chọrọ ụbọchị kwa ụbọchị. [More ...]
Ihe niile banyere Adana Train Station
Ọdụ ụgbọ okporo ígwè Adana bụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè nke TCDD dị na mpaghara Seyhan nke Adana. E tinyere ụlọ ọrụ ahụ na 1912. Taa, ọ bụ ụlọ na TCDD 6th Regional Directorate na Adana - Mersin train. [More ...]
Achọpụtara Mkpụrụ Osisi Ahịa Endem na Tuz Gölü Basin
Onye Minista gburugburu gburugburu na obodo mepere emepe, Murat Kurum, achọpụtala ụdị mkpụrụ osisi pụrụ iche iri asaa na asaa na-anwụ n'ime Salt Lake Basin n'ụwa. [More ...]
E jidere nde sịga 37 nde 190 nke akwụkwọ sịga na İzmir
Ejidere nde 37, 190 XNUMX akwụkwọ eserese na nyocha nke ndị otu Ministry of Trade Customs General Directorate team dị na igbe nwere enyo ọdịnaya na Portia Aliağa nke İzmir. Emere ya maka ịuggụ sịga [More ...]
N'ihi usoro nke Coronavirus, ụlọ ọrụ bọs etiti na-ebugharị njem na pasent 50 nke obibi, na-eche nkwado. N'ime arịrịọ ndị rubere Minista Karaismailoğlu, a naghị akwụ ụgwọ MTV site na 1 pasent VAT, yana ojiji nke FSM Bridge site na nkwụghachi ụgwọ SCT. [More ...]
Obodo ukwu, nke meworo nnukwu ego na njem ndị mepere emepe, rute tram si Hospitallọ Ọgwụ City ruo 75th Afọ District na Opera site na Kumlubel District, site n'inye ike nke edochara. [More ...]
Ndi mmeri nke “Young Art: 4 Poster Design Competition” nke Ministri Maka Omenala na Nleta na-ekwupụta. N'ime asọmpi a kpọrọ "Ochichi-i Milliye", ewepụtara m ọnụ ọgụgụ 46 lira ego nke ndị ọrụ 97 posta ha. [More ...]
Minister Varank: 'Anyị agaghị ekwe ka ụlọ ọrụ ndị Turkey mebie'
Ụlọ ọrụ na Technology Minister Mustafa Varank, na-ekwu na Turkey nwere a siri ike mmepụta akụrụngwa, "Anyị agaghị ekwe ka ndị idem emem nke Turkish ụlọ ọrụ." o kwuru. N'ịchọpụta na atụgharịrị a na-atụ anya na ụlọ ọrụ ụgbọ ala kemgbe etiti June, Minista Varank kwuru: [More ...]
Nkọwa nke Mmụta Nkụgharị Nkụzi Maka Akwụkwọ Mmụta Onwe M
Nkwado n'etiti Turkey na Russia Covidien-19 Vaccine
Onye isi oche nke İBB Ekrem ğmamo visitedlu gara ISTON, nke “satifiketi ọlaedo” nke Conctù Na-ahụ Maka Nkpakọ Mba Nile nyere. Ndekọ ụlọ ọrụ 500 kachasị elu nke Turkey na-achọpụta ebe ha nwere [More ...]
A mara ọkwa nsonaazụ ego ASELSAN na nkeji mbụ nke 2020. Thelọ ọrụ ahụ nọgidere na-enwe uto na ntụgharị ya na mbu mbụ nke 2020. ASELSAN ọnwa atọ na-atụgharị bụ otu ihe ahụ na afọ gara aga [More ...]